Hirshabeelle oo xal u raadineysa fatahaadaha soo noqnoqday | KEYDMEDIA ONLINE
Hirshabeelle oo xal u raadineysa fatahaadaha soo noqnoqday
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo la kulmay diblumaasiyiintii ugu badneyd si xal loogu helo fatahaadaha wabiga Shabeelle uu ka geysanayo degaannada Hirshabeelle
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa kulan la qaatay danjiraha dowladda Norway ee Soomaaliya Ambassador Elin Bergithe Rognlie.
Kulanka labada dhinac ku dhex maray magaalada Muqdisho ayey ujeedadiisu tahay sidii xal waara looga gaari lahaa fatahaadaha wabiga Shabeelle ee soo noqnoqotay sanadihii udambeeyay iyagoo geystay khasaaro isugu jira barakac iyo bur-bur hantiyadeed.
Madaxweeynaha iyo Danjiraha Dowlada Norway ayaa sidoo kale Kulankaan uga hadlay Arrimaha Amniga Doorashooyinka iyo ilaalinta Qoondada Haweenka.
Guudlaawe ayaa sidoo kale kulamo is-daba-joog ah la qaatay danjirayaasha wadamo dhowra oo kamida saaxiibada Soomaaliya, maalin kahor ayey ahayd markii ii Guudlaawe kulan kula qaatay Magaalada Muqdisho Safiirka Dowlada Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya Ambassador Alberto Vecchi, kulanka ayaa looga hadlay Arrimaha Fatahaadaha Amniga iyo Fulinta Mashaariicyo horumarineed oo wax tar u leh bulshada Deegaanada Hirshabeelle.
Madaxweynaha ayaa Ambassador Alberto Vecchi Safiirka Dowlada Talyaaniga ee Soomaaliya la wadaagay Xaaladaha fatahaada ee hada taagan iyo sidii loo caawin lahaa dadkii ku barakacay fatahaada wabiga shabeelle oo ay ku barakaceen in kabadan toban kun oo qoys, kulankaas ayaa intii uu socday waxaa la iskula soo qaaday dhismaha iyo tababarada ciidamada booliiska, Daraawiishta Fulinta mashaariicyo horumarineed oo wax tar u leh bulshada.
Dowladda Talyaaniga ayaa dib ucelisay lacago loogu talagalay in wax looga qabto fatahaadda wabiga Shabeelle taasoo sida la sheegay ay hor istaagtay dowladda dhexe, iyadoo ku cadaadineysa in madaxda Hirshabeelle ay uhoggaansamaan awaamiirta ka imaanaysa Villa Somalia. Tallaabadaas ayaa aad loo cambaareeyay inkastoo dowladda Soomaaliya ay iska fogeysay in ay hor istaagtay mashaariic wax looga qaban lahaa Fatahaadaha wabiga Shabeelle.
Guudlaawe ayaa umuuqda madaxweynaha kaliya ee ka faa'iideysanaya danjirayaasha waddamada saaxiibka la ah Soomaaliya si uu uga faa'iideeyo bulshada ku dhaqan Hirshabeelle oo dhibaatooyinka haysta ay ugu waa weyn yihiin amni xumida ka jirta iyo fatahaadaha soo noqnoqday.